FaceTime kukhompyutha Windows Thwebula & Sebenzisa It
Kulesi sihloko, I khaphi amaklayenti ethu ngokusebenzisa bit by bit thwebula indlela FaceTime ye-PC. Siye futhi ifakwe a rundown ezimangalisayo avelele lolu hlelo. FaceTime kukhompyutha Windows Thwebula & Sebenzisa It. Landela izinyathelo njengoba unikezwe
thwebula FaceTime amawindi
thwebula FaceTime amawindi 7
thwebula FaceTime amawindi 8
Landa i-Fac isikhathi seKhompyutha
I FaceTime App is omunye izicelo ebanda kunazo ukusetshenziselwa isiqophi ukuxoxa nabangani kanye nomndeni wakho. Lolu hlelo lokusebenza adalwe Apple inhlangano ikakhulukazi amaklayenti ayo Nokho ngenxa ekwandiseni izicelo ifayela APK angazisebenzisa ku-Windows ne-Mac PC. Asikwazi ukusebenzisa FaceTime ye-PC on the-Windows Operating System ngosizo i Emulator Android.
On the amathuba off ukuthi udinga ukuthola ulwazi mayelana lolu hlelo lokusebenza, ngaleso sikhathi ukuqhubeka isihloko kanye nokuphenyisisa ngenhlobo ye ngokuya ngakho. Kuyinto elula kwentuthuko ngqo endleleni engcono download FaceTime PC App.
1 Izici FaceTime ye-PC-Windows
2 Indlela Download bese Ufaka FaceTime-Windows Computer
2.1 FaceTime Thwebula PC-APK
3 Indlela Yokusebenzisa FaceTime kukhompyutha-Windows
Izici FaceTime ye-PC-Windows
I FaceTime PC ukulanda mahhala futhi kuphephile noma yikuphi amaklayenti.
FaceTime isicelo igunya futhi noma yimuphi umuntu emhlabeni wonke ungakwazi ukusebenzisa.
Amaklayenti ungenza amakholi wevidiyo njengoba izingcingo umsindo sisebenzisa FaceTime App.
Nokubukeka HD izinga kanye imigomo wethembele igajethi ethile.
Amaklayenti nobudlelwane amagajethi ezahlukene like PC, FaceTime ku-Windows, iPhone, ne-Mac nge azikho izinkinga.
Ngaphezu kwalokho, amaklayenti kungaba Stow kude noma amakholi square ezahlukene uma kwenzeka ukuthi ufisa.
Isicelo ngeke ukuvumelanisa njalo omunye oxhumana nabo kusuka ibhuku lamakheli iklayenti ukuze isicelo futhi iyihlanganise ukuba zonke ezinye amaklayenti FaceTime.
Amaklayenti ungakwazi ukwengeza izivakashi zabo babekhetha zabo “uhlu izinqumo phezulu” esicelweni.
Ngokusebenzisa FaceTime ye-PC, amaklayenti ungenza amakholi wefoni ngempumelelo futhi angakhuluma emhlabeni 9 ukuze 10 abantu bonke ngenkathi.
Indlela Download bese Ufaka FaceTime-Windows Computer
FaceTime ku-PC kungenzeka emva ukulanda BlueStacks ku-PC yakho.
Ungalanda BlueStacks izicelo indawo esemthethweni bluestacks.com.
Ngemva ukulandwa BlueStacks, Faka futhi uma ukulanda azakhayo, kabusha PC yakho.
Hamba kumenyu bese uchofoze isicelo play esitolo.
Ngemva kokuvula-Google Play Isitolo, Chofoza yokusesha bese uthayipha FaceTime bese Download FaceTime amawindi pc.
Ukuze ufake FaceTime ngokushesha, chofa Vula Noma Run, bese ulandela imiyalelo esikrinini sakho. Uma ucelwa iphasiwedi umphathi noma isiqinisekiso, thayipha iphasiwedi noma ukunikeza isiqinisekiso.
Ukuze ufake FaceTime kamuva, chofoza u-Londoloza, bese ukulanda ifayela ukufakwa kwikhompyutha yakho.
Lapho usukulungele ukufaka FaceTime, qhafaza kabili ifayela, bese ulandela imiyalelo esikrinini sakho. Lena kukho ephephile ngoba ungakwazi scan ifayela wokumiswa amagciwane ngaphambili kokuthi uqhubeke.
FaceTime Thwebula PC-APK
Indlela Yokusebenzisa FaceTime kukhompyutha-Windows
Landa i-Fac isikhathi se-Windows
Funda lesi sihloko okuhlanganisa ulwazi oluphelele mayelana inqubo FaceTime kukhompyutha Windows Thwebula & Sebenzisa It. Landela izinyathelo esisinikwa ukulanda FaceTime ye-PC noma FaceTime yekhompyutha ye-Windows. Futhi, hlola izici FaceTime futhi inqubo ukusebenzisa FaceTime.
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime Tagged With: thwebula FaceTime amawindi, thwebula FaceTime amawindi 10, thwebula FaceTime amawindi 7, thwebula FaceTime amawindi 7 64 kancane, thwebula FaceTime amawindi 8, thwebula FaceTime amawindi 8.1, FaceTime amawindi 10 pc, facetime for windows computers, Facetime on Computer windows Download